सांस्कृतिक समीक्षा – मझेरी डट कम
दशैं लगभग नेपालीका घर आँगनमा आइसक्या अवस्था छ । समस्त हिन्दू नेपालीहरूले मान्ने यो शारदीय पर्वोत्सवले घरदेश र परदेशका सबै नेपालीलाई एकै र एउटै हिसाबले छुन्छ ।
नेपालीमा एउटा कर्मचारी लक्षित आहान छ –‘कखुरो काट्यो दशैं, झोला बोक्यो बसैँ ।’ अब जमाना बद्लियो । नेपालीहरूका दिनचर्या र जीवनका शैली फेरिए । के गाउँ के सहर सबैतिर उपभोक्तवादी संस्कृतिले छपक्कै ढाकेको छ । मानिसहरू उत्पादन गरेर खानेभन्दा पनि किनेर खानेमै गर्व गर्छन् । जो किनेर खान सक्दैन उसले आफूलाई निम्छरो ठान्ने देखिन्छ । यसो किन भयो त ? यसका पछि निकै लामो फेहरिस्त प्रस्तुत हुन सक्छन् –तर्कका ।
दशैँ : एकता र सद्भावको पर्व
“दशैँ आयो खाउँला पिउँला, कहाँ पाउँला, चोरी ल्याउँला, धत्त पापी छुट्टै बसौँला” बच्चाका तोते लवज गुञ्जिँदाको मजा बेग्लै लाग्छ । धर्तीको फोहोरलाई पखालेपछि आकाशले बादललाई बिदाइ गरिदिञ्छ । वनको हरियालीमा भमराले गीत गुनगुनाउन थाल्छन् । एकातिर प्रकृतिको उल्लास अर्कातिर वर्षौँका वेदना भुलेर रमाउने नेपाली मनको गन्तव्य । मीठो सम्मिश्रण छ, यसमा । चण्डी पाठ, रुद्री पाठ, जप, पूजामा मन्त्र ध्वनिको सुरम्य आवाज र रौनक छरपस्ट फिँजिञ्छ ।
नर्मधेस्वर र नर्मदा नदीको महत्त्वः एक विवेचना
नर्मधेस्वर शब्दलाई नेपाली बृहत् शब्दकोषले नर्मदा नदीमा पाइने शिवलिङ्गलाई नर्मधेस्वर भनी परिभाषित गरेको छ । यसरी नै कालीगण्डकीमहाकाव्यको शुभाशंस शीर्षक (पृष्ठ घ)मा डा. स्वामी रामानन्द गिरी लेख्नुहुन्छ –‘संसार भारमा दुईवटा मात्र त्यस्ता नदीहरू छन्, एउटी भगवान शिवलाई नर्मधेस्वर शिलाको रूपमा धारणा गर्ने नर्मदा र अर्की भगवान विष्णुलाई शालग्राम शिलाको रूपमा धारणा गर्ने गण्डकी ।
धर्म संस्कार, चलन वा, प्रचलन के हो ?
जोनाथन स्वीटको भनाई यहा उल्लेख गर्न सान्दर्भिक छ – “परस्पर घृणा गर्ने धर्म हाम्रा कयौ छन् तर परस्पर प्रेम गर्ने धर्म थोरै छन् ।”
आफ्नो धर्म मात्र ठूलो, भलो र राम्रो अनि पुरानो हो भन्ने धर्म भीरुहरू प्रशस्त छन् । हामीले मान्दै आएको धर्म सबैले मान्नु पर्छ र गर्नु पर्छ भन्ने एक प्रकारको लडाइँ धेरै पहिलादेखी चलि आएको हो र छ पनि । तर अरुको धर्मको पनि सम्मान गर्नु पर्छ उस्को पनि अधिकार हो, वास्तविकता के हो ? धर्म के हो ? संस्कार के हो समाज के हो भनेर बुझ्ने सबैलाई समेट्न खोज्नेहरू कम छन्, छदै छैनन् हैन, छन् कम छन् ।
ज्योतिष घनानाथ त्रिपाठी
आआफ्नो धर्म संस्कृति र जाति अनुसार आफ्ना कुलका देवतालाई खुसी पार्नको लागि आआफ्नै तरिकाले कुलको पूजा गर्ने प्रचलन परम्परादेखि चल्दै आएको छ । आआफ्नो प्रचलन अनुसार कतै कुल पूजा, कतै कुलायनको पूजा, कुल देवताको पूजा र कतै देवाली पूजा भन्ने गरिन्छ । अन्य धर्म संस्कृतिमा आफ्नो कुल र वंशलाई सम्झने परम्परा भए पनि मूलत: हिन्दू र बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले कुलायनको पूजालाई विशेष महत्त्वका साथ गर्ने गर्दछन् । कुलायनको पूजा गरेमा आफ्नो कुलमा अगति परेका पितृहरूको मोक्ष हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताको आधारमा कुलको पूजा गर्ने प्रचलन चल्दै आएको हो ।
संसारमा अलिक बढी नै चर्चा हुने विषय वस्तुहरूको खोजी गरियो भने पक्कै पनि माया प्रेम नै शिर्ष स्थानमा हुन्छ । यहाँ माया प्रेम अनि विछोडका विषयमा जति गीत र कविता लेखिएका छन् शायद अरु कमै विषयमा लेखिएका होलान् । प्रेम किन हुन्छ ? अथवा प्रेमको परिभाषा के हो भनेर खोजी गर्नेहरूको पनि कमी छैन यहाँ । तर प्रत्येक पटक फरक–फरक नजिता आइरहन्छ किनकि यहाँ सधैं मिलन खुशीका पलहरूलाई प्रेम भन्नेहरू, अरुको खुशीमा प्रेम देख्नेहरूको पनि कमी छैन । तर, अँझै पनि कसैले प्रेम यो हो र यसकारण हुन्छ भन्दै विभिन्न तर्क अघि सारेता पनि ती सबै सर्वमान्य छैनन् । फेरि पनि, प्रेम एउटा अदभुत् अनुभव हो ।
सिंगापुरमा पनि चासोक–तङ्नाम मनाइयो
प्रकृतिपूजक लिम्बू जातिको महान चाड चासोक–तङ्नाम (न्वागी पूजा) सिंगापुरमा पनि धूमधामका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष झैं यसपालि पनि 2016 December 18 तारिक Tessensohn Community Club ( Civil Service Club) को भवनमा किरात याक्थुङ् चुम्लुङ सिङ्गापुरको आयोजनामा चासोक तङ्नाम भव्य रुपमा सम्पन्न भयो ।
हाल : सिङ्गापुर
कठै कसरी मनाउँछ्न दशैं
निशा खनाल अर्याल
अहो दशैं आएछ ! हो हजुर, दशैं आयो रे ! देशमा दशैं, विदेशमा दशैं, यता दशैं, उता दशैं, जता हेर्यौं दशैं नै दशैं । तपाई सोच्नुहुन्छ होला सबैतिर बहार छ । तर कस्तालाई दशैं ? जसको आँखाँको आँशु आजसम्म रुकेको छैन । नाङ्गो शरीरको लाज ढाकिएको छैन । निदाउँन आँखामा निद्रा छैन । कतै नाङ्गो शरीर कठ्यारिएर कतै वर्षामा भिजेको छिद्रा परेका शरीरका कपडा ओभाएको छैन तर दशैं आउने क्रम रुकेन । उसको समय आएरै छाड्यो दशैं ।
सन्दर्भः बाबुको मुख हेर्ने दिन
ज्यो. दीपक सुवेदी
वर्तमानमा हाम्रो समाजमा बाबुआमाहरू अपहेलित हुने, कतिपय स्थानहरूमा शिक्षित भनिएका छोराछोरी–बुहारीहरूबाट पनि तिरस्कार हुने जस्ता विकृतिमूलक क्रियाकलापहरू हुनेगरेको सुन्न, देख्न पाइने गरेको छ । जेनेरेशन ग्याभिङ्गको दरार उत्पन्न गरेर ‘यो/यस्ता कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न, तपाईँलाई किन चाहियो, नकराइकन बस्नुस आदि भनेर’ कतिपय अवस्थामा अभिभावकहरूलाई सही सूचनाबाट बन्चित गराउनेसम्मको व्यवहार हुने गेरको पाइन्छ । मातृपितृसेवा गर्न झर्कोमान्ने मानसिकता नयाँ पुस्तामा बढ्दो छ ।
सडक विस्तारले कलङ्की मन्दिर जोखिममा
काठमाणडौ उपत्यका सडक सुधार आयोजनाको कार्यक्रम अन्तर्गत सडक विभागले उपत्यकाको नौ वटा सडक विस्तार आयोजना गदैछ ।